Qaybo-engeeg Factory - Shiinaha engeeg Qaybo-saareyaasha, shirkado cusub
Mawjadaha Cylindrical engeeg Nozzles
Ku saabsan tan nozzles Ceramic
Mashiinka dhoobada dhoobada ah ee waara ee cirbadeynta walxaha dhexdhexaadka ah ee dhaqsaha looga saarayo rinjiga, miridhku, daxalka iyo cabirka.
Ugu badnaan waxaa loo isticmaalaa farsamaynta qoto dheer sida ciideynta iyo xardho muraayadaha. Xardho iyo farsameynta marmar iyo dhagaxyada kale.
Ku habboon sandblasting iyo derusting dusha sare ee qaybaha mashiinada warshadaha iyo kabka sida mashiinada iyo shubka birta.
Waad isticmaali kartaa noocyo kala duwan oo ah warbaahin sandblasted sida quraaradaha kuul, corundum bunni, garnet, biyo soodhaha, qolofka walnut.
Faahfaahinta xirxirida: biiyaha dhoobada * 10.
Dhar ilaalin ah Dharka shaqada Dharka ilaaliya sandblasting
Dharka Siibese Siamese Dhererka: 180cm,
Heerarka adag ee amniga kaliya maahan inay ilaaliyaan shaqaalaha qiimaha leh,
sidoo kale waxay kordhiyaan waxtarka, waxayna ilaaliyaan sumcadaha adag ee shirkadaha sida alaab-qeybiyeyaasha iyo loo shaqeeyaha.
tijaabiyey iyadoo la adeegsanayo dhammaan tijaabooyinka amniga caadiga ah. Taasi waa habka aan loo baahnayn ee lagu garto
naqshadeynta iyo heerarka sare iyo anshaxa waxay dejiyeen wax kasta oo ay sameynayaan Sababtoo ah shaqooyinka iyo noloshu waxay ku xiran yihiin wax soo saarkooda;
iibin sifiican labalaab venturi boron sandblast biiyaha adiga
Muuqaalka: qolofka birta kaarboon ka dib qarxinta ciidda iyo dahaadhka, qolofka aluminium ka dib qarxinta ciidda.
Tayada sare ee Venturi Boron Carbide Biiyaha Cadaadiska Sare ee biiyaha ciida
adkaansho sare dahaadhida iska caabbinta guryaha daxalka iska caabbinta cufnaanta heerkulka sare: ≥2.48g / cm3 qallafsanaan yar ≥3500kgf / mm2 xoog foorarsiga: ≥400Mpa barta dhalaalaya: 2450 temperature Heerkulka shaqada: heerkulka caadiga ah Cadaadiska Shaqada: 5-100P Length: 150- 220mm Dhexroor caajis ah: 6/8 / 10mm
1 1/4 ”Venturi boron carbide biiyaha ciida
Boron carbide nozzles caadi ahaan dharka noungles tungsten carbide shan ilaa toban jeer iyo silikoon carbide laba ilaa saddex jeer.
Qalabka loo yaqaan 'Boron carbide nozzles' waxaa lagula talinayaa in lagu isticmaalo walxaha sida aluminium oksaydh iyo isku-darka macdanta gardarada ah.